Zizwe sengathi usefilimu ka-Jane Austen! - I-Airbnb
Zizwe sengathi usefilimu ka-Jane Austen!
Ashley, Canterbury, i-New Zealand
Ngaphambilini Umeluleki Wohambo oyintandokazi ngokuvakasha engadini, manje ungavuka ubuhle bale ndlu enhle kakhulu. Hamba phakathi kwemephu nezihlahla zezimbali, funda eceleni kwechibi, uhambe emingceleni ye-herbaceous futhi unukise ama-roses. Singamaminithi angamashumi amathathu ukusuka esikhumulweni sezindiza sase-ChCh, amaminithi amahlanu ukushayela kusuka emathilomu amahle e-Raceora, imizuzu engamashumi amabili ukusuka ezindaweni zokwenza iwayini nehora kusuka e-Hanmer Springs. Jabulela umoya ohlanzekile, ukuthula, ukuthula nobuhle kulesi siqephu sezulu sama-acre amahlanu.
Ngaphandle kwezingadi, kunendawo yokubhukuda/indawo yokuzijabulisa yangaphandle kanye nendlu ye-Wendy kanye ne-trampoline yezingane.
Kunamakamelo okulala amahlanu - amakhosi amabili, indlovukazi eyodwa namakamelo okulala amabili angabekwa kabusha ukuze afanelane nezidingo zakho - kungaba imibhede emibili elala umuntu oyedwa noma imibhede emibili emikhulu kakhulu. Sine-wifi kanye ne-smart TV entsha sha ene-Netflix.
Singemizuzu emihlanu ukusuka e-Roberora (amathilomu amahle, izindawo zokudlela, izitolo ezinkulu ezintathu nesitolo somnyango) kanye nohhafu wehora lokushayela ukuya e-Christchurch. Kukhona izindawo zokwenza iwayini e-Pegasus eseduzane, ibhishi lihamba imizuzu eyishumi ngemoto futhi izintaba zihamba ngemizuzu eyisishiyagalolunye ngemoto. Kukhona ukuhambahamba okumnandi nemizila yamabhayisikili ehlathini lase-Ashley, imizuzu embalwa kude.
Ngeke sibe khona - nizoba nendlu engama-acre amahlanu ngokuphelele. Esimweni esingavamile, ngingase ngibe engadini ngisebenza ngokuthula.